Archive du 10-mai-2022
Banky Iraisam-pirenena “Afaka 70 taona i Madagasikara vao hitovy amin’i Rwanda…”
Sesilany ny fanehoan-kevitra ataon’ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena mikasika an’i Madagasikara. Taorian’ny Vondrona Eoropeanina izay naneho, fa mila antoka ara-pandraharahana na “climat des affaires” tony sy milamina i Madagasikara,
Tezaina hanadino sy hanaiky
Efa misosa ho azy toy ny rano mandeha ny vava tsy ambina ataon’ny Fanjakana ankehitriny. Tsy mba manana fanetren-tena, fa arakaraka ny efa tsy fahombiazana no vao mainka mampidingin-drambo ka asa na tena tsy mahay
Ilaina ankehitriny, hoy ny manam-pahaizana momba ny fizahantany, Durlin Retogniane, ny manarina ny fizahantany anatiny satria vao afaka krizy isika dia sarotra ny hanome tolotra avy hatrany ireo mpizahatany avy any ivelany
Irène Rabenoro “Mila tia tanindrazana ny firenena”
Ny mpampianatra mpikaroka ao amin’ny sampana anglisy eny amin’ny oniversiten’Antananarivo eny Ankatso, Irène Rabenoro,
Fetra, mpidoroka zava-mahadomelina “Tolotolotra avy any aman’olona no naharoboka ahy”
Ankizy 13 taona no zandriny indrindra amin’ireo mandray zava-mahadomelina mahery vaika toy ny heroine eto amintsika.
Village Voara Andohatapenaka 15 minitra dia mivaly ny fitiliana ny Covid 19
Miisa 8 ireo olona marary tratry ny valan’aretina Covid 19 tsaboina etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka amin’izao.
Fahatsiarovana ny 13 mey 1972 Ho avoitra ny fitiavan-tanindrazana
Mandritry ny 2 andro dia ny 12 sy 13 mey izao no hanamarihana ny faha 50 taonan’ny nisian’ny hetsiky ny 13 mey 1972 eny amin’ny oniversiten’Antananarivo amin’ity taona ity.
Antananarivo Renivohitra Tena miparitaka ny rongony mahery vaika “héroïne”
Lehilahy miisa 08 no voasambotry ny sampan-draharahan'ny Polisim-pirenena misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina teto an-drenivohitra ny zoma 06 mey lasa teo rehefa nivarotra rongony sy héroïne.
Filoha Rajoelina Nanolotra fiara hampiasaina amin’ny JMJ –Mada faha-10
Hotanterahina tsy ho ela ny andro maneran-tany ho an’ny tanora na ny JMJ Mada andiany fahafolo ho an’ireo mpino Katolika eto amintsika.
Fitaterana sy fifamoivoizana Ireo antony hampidirana « fourrière » ny fiara
Maro ireo mpampiasa fiara no tsy mahalala izay antony hisakanan’ny mpitandro filaminana azy eny an-dalana ka mety handraisana fepetra hatramin’ny fampidirana ny fiara ho any am-balam-pamonjana na « Mise en fourrière ».
Fifidianana filoham-pirenena Mora voarebireben’ny olom-baovao ny Malagasy
Manomboka mahoraka ankehitriny fa misy olom-baovao hipoitra tampoka indray eto rehefa tena ho raikitra ny fifidianana ny fifidianana filoham-pirenena.
Moto nifandona tamin’ny fiara 4x4 Naratra mafy ilay talen-tsekoly
Niharan'ny lozam-pifamoivoizana teo amin’ny 1 km hidirana ny tanàna misy azy ny Talen'ny EPP ao Ankileisoke Anakafy.
Tanàna madio sy milamina Tokony hanadio izay tandrify azy ny tsirairay
Tsy tokony hiandrasana ny hafa hibaiko na koa hiandry fanentanana ny tsirairay vao hahay hanadio ny faritra misy azy.
Demokrasia sy zon’ny olom-pirenena “Tondron’ny fihemorana ny teritery amin’ny fanaovan-gazety”
Naneho hevitra momba ny fanajana ny zon’ny olom-pirenena ny Praiminisitra lefitra teo aloha Atoa Zaza Manitranja Ramandimbiarison.
Wendy Cathalina Saika nivarina tanaty hantsana ny fiara nitondra azy
Niharan-doza ny mpanankato Wendy Cathalina sy ny ekipany rehefa avy nanatanteraka fampisehoana tao Moramanga Bezanozano Hôtel ny Sabotsy 07 mey lasa teo nandritra ny fifantenana ireo vehivavy tsara tarehy
Aretin’ny vanin-taolana 5 taona ny zaza dia mety efa voan’ny “Rhumatisme”
Fotoana fihetsehan’ny aretin’ny vanin-taolana izao. Anisan’ireny ny romatisma izay fantatra fa 5 taona no zandriny indrindra voany.
Halatra anaty fiara Nabaribarin’ny « caméra de surveillance » ireo jiolahy
Lehilahy miisa roa no voasambotry ny Polisy teny Andranomanalina sy Tsimbazaza ny 05 sy 06 mey lasa teo rehefa nangalatra tao anaty fiara tetsy Andranomena ny 04 mey.
Na ianareo aza ve tsy efa madilo-sofina amin’ny menomenona sy fitarainan’ny olona isam-pokontany eny e.Fa inona moa izao no zavatra mba mandea amin’izay laonina sy mety tsara eto ?